ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ILO မှ Deputy Director General ဖြစ်သူ Mr. Greg Vines ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ILO မှ Deputy Director General ဖြစ်သူ Mr. Greg Vines ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ILO မှ Deputy Director General ဖြစ်သူ Mr. Greg Vines ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ၊ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်အတူ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ILO မှ Deputy Director General ဖြစ်သူ Mr. Greg Vinesမှ ၁၀၆ ကြိမ်မြောက် ILC တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှ အိုင်အယ်လ်အိုအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရခြင်း အပေါ်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းပြောကြားပါသည်။ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ILO တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းစီမံချက် အမြန်ဆုံးအတည် ပြုနိုင်ရေးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံတွင်းကောင်းမွန်သင့်တော်သည့် အလုပ်အကိုင် အစီအစဉ် Decent Work Country Program ကို ရှေ့ဆက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နေ့လည် (၁၃း၀၀) နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ခံနေကြရသော အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများအား လုံလောက်သော ပြင်ဆင်ချိန်ပေးရန်၊ လုံခြုံမှုအတွက် ကာကွယ်ပေးရန် အပါအဝင် ရှေဆက်၍ နှစ်နိုင်ငံအကြား လိုအပ်သော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီး မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများအား စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်၍ တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဖြစ်စေရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ခလစာ အပြည့်အဝရရှိစေရေးနှင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံ အထောက်အထား(CI) ထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ထို့အပြင် နယ်စပ်များရှိ တရားဝင် ဝင်ပေါက်များမှ သွားရောက်ခွင့်ရှိသည့် နယ်မြေများကို နှစ်ဘက်စလုံးတွင် တို့ချဲ့သတ်မှတ်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လအလိုကျ သတငျးမြား Select Month June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 November 2011 July 2011
မျောတျောယာဉျ တိမျးမှောကျမှုတှငျ သဆေုံးခဲ့သညျ့ အလုပျသမား ၆ ဦး၏ မိသားစုဝငျမြားအား အာမခံကွေးပေးအပျပှဲ အခမျးအနားကငျြးပ
လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့၏ သတငျးအခကျြအလကျစနဈ (SSB Information System)အတှကျတငျဒါ အဆိုပွုလှာတငျသှငျးသညျ့ ကုမ်ပဏီမြားစာရငျး ကွညောခွငျး
ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဦးသိနျးဆှေ၊ HRD-Korea ၏ဒုတိယဥက်ကဌ Mr. Lee Yeon Bog ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့နှငျ့ ILO Liaison Officer Mr. Rory Mungoven ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့တို့ အားသီးခွားစီလကျခံတှဆေုံ